ပီဒရီ ရဲ့ စာချုပ်သစ် ၊ လီဗာပူးအတွက် သတင်းကောင်း ၊ ဂျိုရှုအာ နဲ့ ထိုးချင်တဲ့ ဝိုင်းဒါးလ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
“ဆိုးရှား က လူတော်မဟုတ်သလို ကစားသမားတွေကလည်း နည်းပြနောက်မှာ ပုန်းမနေသင့်ဘူး” – ပေါလ်မာဆွန်
မာဆေး ဆိုဒ် ဒါဘီ ပွဲစဉ် နောက်ပိုင်း လီဗာပူး ပွဲကို ပထမဆုံး ပြန်လည် ကိုင်တွယ်မယ့် ဒေးဗစ် ကုတ်တီ
၀က်ဖို့ဒ်ကို ၅-၀ နဲ့ နိုင်ထားခဲ့တာတောင်မှ ပွဲအပြီးမှာ သူ့ကို ဆာလား ဘာလာမေးခဲ့သလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဖော်စတာ
ပီဒရီ ရဲ့ စာချုပ်သစ် ၊ လီဗာပူးအတွက် သတင်းကောင်း ၊ ဂျိုရှုအာ နဲ့ ထိုးချင်တဲ့ ဝိုင်းဒါးလ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ထွန်းတောက် ကြယ်ပွင့်လေး ပီဒရီ ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် အထိ ဆက်ရှိစေမယ့် စာချုပ်သစ် ကို ချုပ်ဆို နိုင်ဖို့ အတွက် ဆွေးနွေး နေပြီး အခြေအနေ ကောင်းမွန် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ပီဒရီ ရဲ့ စာချုပ်သစ် မှာ ယူရို သန်း ၆၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိမယ့် စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေးလည်း ပါဝင်မယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
စပိန်ရဲ့ အားကစား ကောင်စီ ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ သွားရောက် ကစားကြတဲ့ အမေရိက ကစားသမားတွေ ရဲ့ အချိန်မီ ပြန်လည် ရောက်ရှိ မလာနိုင်မှုကြောင့် ဒီတပတ် မှာ ကစားမယ့် ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ ဘီဘာအို ၊ ဂရန်နာဒါ နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်တွေ ကို ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် တောင်ပံ ကစားသမား ဂါရတ်ဘေးလ် ကတော့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ မှာ ဘီလာရုစ် အသင်းနဲ့ ကစားမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ မတိုင်ခင် ဒဏ်ရာ ကနေ ပြန်လည် သက်သာ ကောင်းမွန်လာဖို့ ပစ်မှတ် ထားနေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းခေါင်းဆောင် ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား ဟာ ဒီကနေ့ မှာ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် အထိ အသင်းနဲ့ ပြန်လည် လေ့ကျင့်မှု မပြုလုပ် နိုင်သေးဘူးလိ့ု သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး မှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ယူရဂွိုင်း ( ဥရုဂွေး ) ကစားသမားဟောင်း ဂပ်စ် ပိုယက် ကတော့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရောက်ရှိလာမှုကြောင့် ပွဲ ကစားခွင့် နည်းပါး သွားတဲ့ ကာဗာနီ ဟာ ဇန်နဝါရီမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို စွန့်ခွာဖို့ စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ကလပ် ဘရုဂေး တောင်ပံ ကစားသမား နိုအာလန်း ကို စိတ်ဝင်စား နေပြီး လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
PSG နဲ့ လေ့ကျင့်မှု ပြန်လည် ပြုလုပ် နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဆာဂျီယို ရာမိုစ့် ဟာ ယခု သောကြာနေ့ မှာ ကစားမယ့် လီဂူးဝမ်း ပွဲစဉ် မှာတော့ PSG အတွက် စတင် ကစားပေး နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အသင်း နည်းပြ ပိုချက်တီနို က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဖီဖာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ တုန်းက ကစားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် နဲ့ ပိုလန် အသင်းတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ က ကစားသမားတွေ အကြား အချင်းများခဲ့မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးယူမှု ပြုလုပ် သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီမီလန် အသင်းကတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် ၂ လကျော် အနားယူရတော့မယ့် နံပါတ် ၁ ဂိုးသမား မစ်ဂ်နန် ကြောင့် ဂိုးသမား အင်အား ဖြည့်တင်းဖို့ အတွက် အသက် ၃၈ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဂိုးသမားကြီး အန်တိုနီယို မီရန်တီ ကို ခေါ်ယူကာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် ချုပ်ဆို လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကစားသမား ၂ ဦး ဖြစ်တဲ့ ထရန့် အလက်ဇန်းဒါး အာနိုး နဲ့ ဒီယေဂို ဂျိုတာ တို့ ဟာ လေ့ကျင့်ခန်း အပြည့် ပြန်ဆင်း နိုင်ကြပြီလို့လည်း သတင်းကောင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး ယိုဟန် ခရပ်ဖ် ရဲ့ သားဖြစ်သူ ဂျော်ဒီ ခရပ်ဖ် ဟာ ရော်နယ် ကိုးမန်း ကို ထုတ်ပယ်ခြင်း မပြုဘဲ အချိန်ပေး စောင့်ကြည့်ဖို့ အသင်းရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ ကို တိုက်တွန်း ပြောဆို ခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည် သက်သာလာတဲ့ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူး အဂွေရို ဟာ ယမန်နေ့က ကစားခဲ့တဲ့ တံခါးပိတ် ခြေစမ်းပွဲမှာ ဂိုး သွင်းယူ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အသင်းသစ်အတွက် စတင် ကစားပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြောင်း အသိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် လက်ဝှေ့ ချန်ပီယံ တိုင်ဆန် ဖျူရီ ကို ၁၁ ချီမြောက်မှာ ရှုံးနိမ့် ခဲ့အပြီးမှာတော့ ဒီယွန်တေ ဝိုင်းဒါးလ် ဟာ နောက်ထပ် ဗြိတိန် လက်ဝှေ့ အကျော် အမော် တယောက် ဖြစ်တဲ့ အန်တိုနီ ဂျိုရှူအာ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စား လာခဲ့တယ် လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဝိုင်းဒါးလ် အနေနဲ့ ဖျူရီ နဲ့ ထိုးသတ် ခဲ့တဲ့ ပွဲက ဒဏ်ရာတွေကို ဦးစွာ ကုစားရဦးမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ မေလ မတိုင်ခင် အထိ ထိုးသတ်ဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟိုဟာ သူ့အပေါ် ဘယ်လောက်အထိ ကောင်းခဲ့လဲ ၊ ဘယ်လိုတွေ ဂရုစိုက်ပေးခဲ့လဲဆိုတာ ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ လင်ဂတ်
© xyznews.co 2021 • Shakey powered by WordPress